Julie Wyona Vecchio Lewiston, Maine Therapist, Addiction & Recovery Resources - The Fix
Therapist > Maine > Lewiston > JULIE WYONA VECCHIO
369 MAIN ST Lewiston Maine 04240-7030
Contact Information About JULIE WYONA VECCHIO, CADC
JULIE WYONA VECCHIO has an office in Lewiston, Maine and provides counseling and/or therapy for their clientele. JULIE WYONA VECCHIO is listed as a CADC, but may provide additional support.
For detailed questions about JULIE WYONA VECCHIO’s therapy practice, you should contact their Lewiston offices at 2077823386.
JULIE WYONA VECCHIO is local to the 04240-7030 area.
JULIE WYONA VECCHIO Reviews, Feedback, & Complaints
The Fix definitely wants its readers to submit authentic JULIE WYONA VECCHIO reviews, if you had a real-life experience as their client, or know a person who has. If you’ve gone to JULIE WYONA VECCHIO in Lewiston, Maine you are encouraged to share details about your experience, as long as you do not break confidentiality.
We also do not want you to reveal personal information or data about JULIE WYONA VECCHIO or any of their staff members, employees, clientele, or patients.
If you are the business owner or an authorized representative of JULIE WYONA VECCHIO, you may contact us to resolve problematic or false information, but we ask that you not write, copy, paste, or otherwise contribute promotional material about your own place of business (or the business that employs you).